fanafohezan-teny : OZ
Créé : 1975
mpianatra (eo ho eo.) : 22000
Aza adino ny mifanakalo hevitra momba ny Murdoch University
Misoratra anarana ao amin'ny Oniversite Murdoch
Tonga soa eto amin'ny Murdoch University, Perth, Western Australia.
Murdoch University dia ekena iraisam-pirenena ho toy ny fikarohana tarihin'ny andrim-panjakana amin'ny fomba malefaka ny fianarana.
Miasa miaraka ny mpianatra mpikaroka manam-pahaizana manokana mba hiatrehana ny zava-tsarotra indrindra eran-tsarotra.
Ny nahazo diplaoma dia nitady rehefa amin'ny raharaham-barotra sy ny orinasa ho toy ny vokatry ny avo-tsara ny fampianarana, multidisciplinary diplaoma tsikombakomba, mitarika-tsisin'ny fikarohana sy mifanaraka-tena izao tontolo izao fianarana.
Ao amin'ny Murdoch University in Perth, Aostralia, mirehareha izahay mba manana mihoatra noho 22,000 mpianatra ary 2,000 tehina avy manerana 90 amin'ny firenena miaraka amin'ny faniriana mba hahita, mampiasa ny saina, ary amin'ny farany ho fahasamihafana.
Tsy manaiky ny fomba fisainany sy hamporisika maimaim-poana ny Murdoch vondrom-piarahamonina mba hizara hevitra, dobo fahalalana sy mahita fomba vaovao ny fisainana. manerana an'i Aostralia, isika dia fantatra ho tsara fampianarana, tany-famakiana ambony fikarohana sy ny isan'ny mpianatra afa-po.
In Western Australia, ny South Street fonenan'ny mpianatra manana foto-drafitrasa isan-karazany ao anatin'izany ny feno vet hopitaly (amin'ny WA ny fandidiana ihany no equine teatra), injeniera mpanamory fototra, ny Chiropractic toeram-pitsaboana, Media Arts foibe sy ny maro hafa. Isika koa campus in Singapore, tandrifin'ny National Library ao amin'ny fanabeazana Hub, ary any Dubai izay ny mpianatra mampiasa ny fanjakana-avy-ny-zavakanto TV sy ny onjam-peo Studios, efitrano famoaham-baovao sy ny fanitsiana Suites.
Isika dia nekena ho iray amin'ireo mpitarika Aostralia fikarohana andrim-panjakana, toy ny orinasa kokoa mametraka ny finoany sy ny harena an-tetikasa mba hanome ny fikarohana ny kandidà sy ny mpahay siansa sy ny fahafahana hanao mahagaga hitan'ny mpahay siansa.
Murdoch mihevitra ny fahafahana ny mpianatra mba handray anjara amin'ny asa sasany amin'ny teny-mifandray traikefa manan-danja toy ny endriky ny fianarana manontolo ny tsirairay ny antokony. Ny University Ny Asa Integrated Mianatra (TE) Program mikatsaka ny hanome traikefa manan-danja ho an'ny mpianatra fianarana, raha mamela azy ireo mba hampiseho ny fahaiza-nahazo diplaoma ny mpampiasa.
Sekoly ny Engineering sy ny Fampahalalam-baovao
Ianao ve mila mifanakalo hevitra momba ny Murdoch University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Midira hiresaka momba ny Murdoch University.
Oniversiten'i Aostralia Atsimo Adelaide